Indlela Yokubhala Imihlathi Elandelanayo ngesiNgesi
Iilwimi Ukubhala izakhono
Qalisa ukuchaza izinto ezenzeka kwixesha
Iziqendu ezilandelanayo ziqhele ukusetyenziswa ukuchaza into eyenziwa ngumntu ngexesha elide. Funda lo mhlathi umhlathi, qaphela indlela amagama afana ne 'kamva' asetyenziswa ngayo ukuxhuma okwenzekayo.
Izolo ngokuhlwa ndabuya ekhaya ndisebenza emsebenzini nge-6 ntsimbi. Umfazi wam wayelungiselele ngokumangalisayo isidlo esiphundu esasidla ngokukhawuleza. Emva kokuba ndihlambulule ikhitshi, sasibukela umboniso weTV owawucebisa umhlobo wam. Emva koko, safumana idokotla ubusuku busedolophini. Abahlobo bethu bafika malunga ne-9 yintsimbi kwaye saxoxela isikhashana. Kamva, sagqiba ukutyelela i-club ye-jazz yendawo kunye nokuphulaphula i-bebop kwithuba elithile. Abaculi abavuthayo bavuthela iimpondo. Sasiyithanda ngokwenene kwaye sahlala ngokukhawuleza sishiya emva kokuba iqela liye ladlala isethi yabo yokugqibela.
Ixesha elidlulileyo lokulandelelana kweziganeko:
Sichaza ngexesha elidlulileyo xa iziganeko zilandelana. Nazi imimiselo. Phawula ukuba isiganeko ngasinye senzeke ngokulandelelana.
Ndavuka ndaya ekhitshini. Ndavula umnyango ndaza ndajonga efrijini.
Wafika eDallas, wathatha ikati, waza wangena kwihotele yakhe. Emva koko, wayedla isidlo kwisitoretri. Ekugqibeleni, watyelela umhlobo wakhe ngaphambi kokulala.
Ukuqhubeka okuqhubekayo ngezenzo eziphazamisekileyo:
Ukubonisa ukuba isenzo siphazamisekile, sebenzisa ixesha elidlulileyo ekuchazeni oko kwenzekayo xa kukho ukuphazamiseka. Sebenzisa oluluhlu oludlulileyo kunye nesenzo esiphazamisa okwenzekayo.
Ekugqibeleni, njengoko sasixoxa ngale ngxaki, utitshala wangena eklasini. Ngokucacileyo, siyeka ukuthetha ngokukhawuleza.
USharon wayesebenza engadini xa ifowuni ibhala.
Ukugqibelela kwangaphambili kwizenzo zangaphambili:
Ukuvakalisa into eyagqityiweyo ngaphambi kwesinye isiganeko kwixesha elidlulileyo, sebenzisa ukugqibelela kwangaphambili. Oku kunenzuzo ngakumbi xa kunika ingcaciso kwinto eyenzekayo.
Sagqiba kwelokuba siphume siye kubhiyozela ngenxa yokuba sasisandul 'ukugqiba ukulungisa ikhaya lethu.
UJanet akazange asijoyine esidlweni sakusihlwa njengoko wayesele esidlile.
Ukuqhubeka okugqibeleleyo okuqhubekayo ngobude bezenzo:
Ukuqhubeka okugqibeleleyo kusetshenziselwa ukubonisa ukuba bekude kangakanani into eyenzekayo kwixesha elidlulileyo.
Sasihamba ngeeyure ezingaphezulu kweeyure ezili-10 kwaye kwakuyisihlandlo sokuyibiza ngelanga.
Wayekhonze ngeenyanga ukuze athole umsebenzi ongcono xa ekugqibeleni wayeqeshwe.
Ukuqala izivakalisi ngexesha lokuthetha
Qala izivakalisi ngokuqhagamshela amabinzana athi 'Emva koko,' 'Emva koko,' 'Ekugqibeleni,' 'Ngaphambi koko', njl. Ukuxhuma izivakalisi kunye nokubonisa ubudlelwane bexesha kwimbali yakho yokubhala.
Okokuqala, sahamba siye eNew York kwiindawo zethu zokuzonwabisa. Emva kweNew York, safudukela ePhiladelphia. Emva koko, bekuseFlorida malunga nokudilika kwe-scuba.
Emva kwesidlo sasekuseni, ndachitha iiyure ezimbalwa ndifunda iphephandaba. Emva koko, ndadlala i-softball kunye nendodana yam.
Sebenzisa izigaba zexesha ukubonisa ubudlelwane ngexesha.
Sebenzisa 'ngaphambi', emva kokuba ',' ngokukhawuleza ', njl. Ukuzisa isigatya somzuzu. Ukuhlawula ingqalelo ngokukhethekileyo ekusebenziseni amaxesha kunye nezigaba zexesha. Qalisa isivakalisi ngeli gama, kodwa sebenzisa i-comma ngaphambi kwesigatshana esinqununu. OKANYE Qalisa kunye negatya eliphambili uze uphele kunye negatya lesikhathi usebenzisa i-comma.
Emva kokuba sifeze umsebenzi wethu wesikolo, sibukele ifilimu ehlekisayo.
Baya kwiintlanganiso ngokukhawuleza xa befika eChicago.
Xa ubhala ingxelo, ingcamango enhle ukuquka ulwimi oluchazayo ukuze uncede abafundi bafumane ukuvakalelwa kwinto eyenzekayo.
Nazi ezinye iziphakamiso malunga nokwenza ukuba umbhalo wakho uchaze ngakumbi.
Sebenzisa izichazi ukuguqula izibizo. Akukho nto iyakhazamisayo ngaphezu kwesigwebo esinjengathi Saya kwivenkile. Kulula ukuguqula ivenkile ukuba ibe ngokuchanekileyo kunye nokuchazayo. Siye kwibhokisi enkulu ye-electronics store kugqithise ngakumbi.
Bathenga imoto. -> Bathenga imoto ebomvu yaseNtaliyane.
Watshala umthi. -> Watshala umthi omncinane.
Sebenzisa amabinzana asengaphambili esekona kunye nakwebhanki ukunika ingcamango apho kwenzeka khona into, kwakunye nobudlelwane phakathi kwezinto.
Emva kokuba sifika, saboniswa etafileni lethu emva kwevenkile yokutyela.
Imoto yayimiswe ngapha kwekona ngaphesheya kwesitalato.
Sebenzisa izigatshana ezihambelanayo ukuze uchaze ngakumbi kwaye unikele ngolwazi malunga neenkcukacha ezibalulekileyo kwingxelo yakho.
Emva koko, sasinandipha iglasi elimnandi lewayini elakhulile endaweni.
Emva koko, sithatha imoto esasiqeshise eLos Angeles kwaye siqhubela eSan Francisco.
Ukuzivocavoca okubhaliweyo - Ukusebenzisa iiVenzi zokuPhumela kunye neziPhambi
Bhala izi zivakalisi zilandelayo kwisiqwenga samaphepha ukuze wenze umhlathi esekelwe kumhlathi olandayo ngenhla. Qinisekisa isenzi ngasinye kwixesha elidlulileyo kwaye unikezele iziphakamiso ezichanekileyo . Cofa kwitolo ukuze uhlole iimpendulo zakho.
Izolo ngokuhlwa uJack _____ (fumana) ikhaya _____ (isilungiselelo) kwisiqingatha esisihlanu esisihlanu.
Ngokukhawuleza _____ (yenza) indebe _____ (isilungiselelo) ikhofi kunye ne- _____ (hlala phantsi) ukufunda incwadi.
U- _____ (funda) incwadi _____ (i-preposition) yesiqingatha esisixhenxe esisixhenxe.
Emva koko, _____ (yenza) isidlo kunye ne- _____ (lungela) ukuphuma kunye nabahlobo bakhe.
Xa abahlobo bakhe _____ (beza), ba _____ (banqume) ukuba baphume baye kubona ifilimu.
U- _____ (hlala) kude kube phakathi kobusuku kunye nabahlobo bakhe.
Ekugqibeleni, u _____ (ukuwa) ulele _____ (isilungiselelo) malunga neyure enye.
Ukuzivocavoca Okubhaliweyo - Ukwenza Ukubhala Kwakho Kunomdla
Phinda ubhale izivakalisi ezilandelayo usebenzisa ulwimi oluchazayo ukuze ucoce ukubhala kwakho.
Emva koko, lo mntu waya ekhaya.
Kamva, saqhuba kwindawo yokutyela.
Wawugqibile ingxelo ngaphambi kokuba ndibone le ntetho.
Abantwana babeya kwiklasi.
Abahlobo bam bacela uncedo.
Ukuzivocavoca okubhaliweyo - Ukongeza uLwimi oluHlangeneyo
Ngoku ukuba unesimo esihle sengxelo yomhlathi olandayo . Gcwalisa ikhefu kule mhlathi ukubonelela ngolwimi olufanelekileyo ukudibanisa umhlathi.
_________ Ndaqhuba imoto yam enomdla ukuba ndivakashele umhlobo wam omhle.
_______ Ndafika, wenza konke okusemandleni akhe ukulungiselela ukutya okuhlwayileyo. ________, sithatha uhambo olude ngepaki ecaleni kwendlu yakhe. __________ sasiye ngaphaya kweyure, umhlobo wam wandibuza ukuba ndingakwazi ukugcina imfihlelo. _________, ndifungile ukuba ndingamxeleli nabani na. _________ wachaza ingqungquthela yasebusuku obunobunzima ngaphandle kwedolophu __________. ________, wandixelela ukuba wayedibene nomfazi wamaphupha akhe kwaye bafanele batshata ___________. Khawucinge nje!
Oko Kufuneka Ukwazi NgeziMpawu zeMacacritical in Spanish
Ulwimi-olubandakanya uLwimi lwabafundi baseNgesi
Ukubonisa isongezelelo kwisiNgesi esibhaliweyo
Ukubonisa ibanga / Impembelelo kwisiNgesi esibhaliweyo
Ukubhala izivakalisi zabaqalayo
Ihlabathi lika-Christina - iNdlu ka-Andrew Wyeth Painted
Indlela Yokuphanda I-Loyalist Ancestors
Imfazwe Yehlabathi II / iMfazwe yaseVietnam: USS Shangri-La (CV-38)
I-Origins, Injongo, kunye nokuqhubela phambili kwe-Pan-Africanism
I-Myriapods: Amaninzi amaninzi
Yintoni i-Absolute Adjective?
Indlela Yokunyamekela Iikati Zakho Zemizobo
Ukucamngca kwiimfihlakalo ezibuhlungu zeRosari
ISebe loMlando woKhuseleko lomhlaba
Indlela yokubhala incwadi yoBheno kwiKholeji yokuCima
Iintlekele zeNdalo zeNdalo zaseMelika eziPhezulu kakhulu
Iimbambano ezinkulu zeMfazwe Yehlabathi I